कुमारीपाटीमा एक दिने सेयर बजार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम हुने !
ARCHIVE » कुमारीपाटीमा एक दिने सेयर बजार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम हुने !
काठमाडौँ - पछिल्लो समय काठमाडौँमा सेयर बजार सम्बन्धी तालिमहरुको संख्या बढीरहेका बेला कुमारीपाटीमा पनि यस्तै छलफल आयोजना हुने भएको छ । नेपाल सेयर हबको आयोजनामा 'एक दिने सेयर बजार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम' नाम दिईएको उक्त कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री प्रमुख वक्ता रहनेछन् ।
साथै उक्त कार्यक्रम छोटेलाल रौनियार, उत्तम अर्याल लगायतका लगानीकर्ताहरुले लगानीका बारेमा छलफल गर्नेछन् । कार्यक्रममा अहिलेको वर्तमान सेयर बजारको अवस्था, मौद्रिक नीति र त्यसको पूँजी बजारमा प्रभाव लगायत विषयमा चर्चा हुनेछ ।
उक्त कार्यक्रममा अर्थ सरोकार डटकम मिडिया पार्टनरको रुपमा रहनेछ ।